EasyChat ho an'ny WhatsApp maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
EasyChat ho an'ny WhatsApp maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Nota: Tao anatin'ny minitra vitsy namoahana ny vaovao dia tsy misy intsony izy io alefa maimaim-poana.
Ny rindranasan-kafatra hafatra dia ny filaharana ary vitsy ny mpampiasa izay tsy mampiasa ankehitriny. SYNy mpanjaka tsy azo iadian-kevitra amin'ny fandefasana hafatra eo no eo dia ny WhatsApp, arahin'ny Facebook Messenger, samy mahaliana fa samy tompona iray ihany izay tsy iza fa i Mark Zuckerberg, tompon'ny Facebook.
Volana vitsivitsy lasa izay, ny fampiharana fandefasan-kafatra nanangana serivisy web, somary maloto ihany, izay amin'ny alàlan'ny tranokalanay no ahafahantsika miditra amin'ny resadresaka ifampiresahantsika amin'ny alàlan'ny finday. Eo an-tsena isika izao dia afaka mahita rindranasa marobe izay manampy antsika hisoroka ny serivisy amin'ny Internet.
Androany dia miresaka momba ny EasyChat ho an'ny WhatsApp izahay, fampiharana iray ahafahantsika mitazona ny resaka WhatsApp amin'ny alàlan'ny Mac. Azo alaina maimaimpoana maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ity rindranasa ity, ka avelao izay rehetra ataonao ary mihazakazaha misintona azy.
Ny tena asan'ny EasyChat ho an'ny WhatsApp dia:
Fandraisana haingana sy mora amin'ny WhatsApp avy amin'ny birao anay.
Miresaka amin'ny namantsika, anisan'izany ny fanohanan'ny vondrona.
Afaka maka sary amin'ny alàlan'ny webcam-nay isika hizara amin'ny namantsika.
Fampandrenesana ao anatin'ny fampiharana.
Io dia ahafahantsika mizara hafatra am-peo amin'ireo namantsika ihany koa.
Azontsika atao koa ny manamboatra ny haben'ny varavarankely mifanaraka amin'ny filantsika.
Mila mitadidy izany ianao EasyChat for WhatsApp dia tsy novolavolain'i WhatsApp, ary tsy mifandray amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa tambajotra sosialy Facebook. Toy ny kinova an-tranonkala, raha te hampiasa ity rindranasa ity dia mila mampifandray ny iPhone sy manana bateria ampy hiasa ny serivisy.
Na eo aza ny fahombiazany tsara, raha mila fampiharana mailaka tsara mifanaraka amin'ny sehatra rehetra ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mampiasa ny serivisy Telegram, izay efa noresahintsika tamin'ny fotoana maro ary misy fiasa maro kokoa noho ny WhatsApp.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » EasyChat ho an'ny WhatsApp maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Killa Bee (@daniglevelas_) dia hoy izy:
Salama, niditra tao amin'ny App Store aho ary tsy maimaim-poana.
Mamaly an'i Killa Bee (@daniglevelas_)
Ho an'ny firenena iza no malalaka?
Amin'ny lafiny rehetra fa tsy afaka intsony izy io, jereo maimaika isika raha momba ny famoahana ireo karazana tolotra ireo, na dia izany aza dia naharitra ora roa monja.
Misy fampiharana hafa antsoina hoe Chichat izay manao zavatra mitovy ihany https://www.soydemac.com/chitchat-una-app-para-usar-whatsapp-web-en-nuestro-mac/ Tsy ao amin'ny App Store io fa maimaim-poana.
Toa mailaka loatra isika amin'izany
Andres Gomez dia hoy izy:
Noheveriko fa io ihany no miandry!
Valiny tamin'i Andres Gomez
mars1463 dia hoy izy:
Eny, tsy maimaim-poana ...
Valiny tamin'ny mars1463
David Fernandez Vila dia hoy izy:
Tsy marina izany, eo amin'ny € 9,99 amin'izao fotoana izao
Valiny tamin'i David Fernández Vila
Sagutxu dia hoy izy:
Efa misy ny fampiharana somary tsara sy maimaim-poana hijerena whatsapp amin'ny mac. Chitchat no iantsoana azy
Mamaly an'i Sagutxu
Jereo fa maika isika raha ny amin'ny famoahana ireo karazana tolotra ireo, na dia izany aza dia naharitra ora roa monja.
Misy fampiharana hafa antsoina hoe Chichat izay manao zavatra mitovy ihany https://www.soydemac.com/chitchat-una-app-para-usar-whatsapp-web-en-nuestro-mac/ tsy ao amin'ny App Store io fa maimaim-poana
Jereo, maika ny hamoaka ireo karazana tolotra ireo isika, na dia izany aza, toa naharitra ora roa monja ... Misy fampiharana hafa antsoina hoe Chichat izay mitovy ihany https://www.soydemac.com/chitchat-una-app-para-usar-whatsapp-web-en-nuestro-mac/ Tsy ao amin'ny App Store io fa maimaim-poana.
Araka ny lazain'i Sagutxu dia misy safidy hafa. Jereo fa maika hamoaka ireo karazana tolotra ireo isika, na dia izany aza, toa naharitra ora roa monja.
Mazava ho azy fa maimaim-poana izany?
Lisitra ofisialin'ny mozika nakarina indrindra avy amin'ny iTunes Spain
Voasambotra $ 16.000 amin'ny scam amin'ny Apple Products